Lahatsoratra nataon'i PJ Taei momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i PJ Taei
PJ no mpanorina sy filohan'ny Uscreen, iray tonta sehatra monetization video izay manome fahefana ireo mpandraharaha horonantsary sy mpamorona hamorona vola amin'ny atiny sy hanangana vondrom-piarahamonina sy orinasa mandroso manodidina ny lahatsarin'izy ireo.
Talata, Aogositra 27, 2019 Talata, Aogositra 27, 2019 PJ Taei
Misy antony marim-pototra mahatonga ny Subscription Video On Demand (SVOD) mitsoka izao: izao no tadiavin'ny olona. Ankehitriny dia maro kokoa ny mpanjifa no misafidy atiny anaty horonan-tsary izay azon'izy ireo atao ny misafidy sy mijery ny fangatahana, mifanohitra amin'ny fijerena matetika. Ary asehon'ny statistika fa tsy miadana ny SVOD. Ny mpandalina dia maminavina ny fitomboany hahatratra ny marika mpijery 232 tapitrisa amin'ny taona 2020 any Etazonia. Ny mpijery manerantany dia antenaina hipoaka amin'ny 411 tapitrisa amin'ny 2022, raha 283